कसरी मनाउने ‘भ्यालेन्टाइन डे’ ? | विचार | साझामन्च
अनलाइन, प्रकाशित मिति : २०७४ ,फाल्गुन , २ 09:16:00
गीतको सौखिन भएर नै होला ब्यस्त जीवनमा मेरा लागि गीत संगीत एक मेडिटेसन नै भएको छ। फुर्सद पाउनासाथ गीत सुन्ने, गुन गुनाउने बानीले होला एक्लै बस्दा शून्य लागेर आउँछ। जब एक्लो हुन्छु तब गीत सुन्ने बानी नै बस्यो।
‘मेरो सारा जीवन सबै तिमीलाई
मिठा–मिठा क्षणहरू सबै तिमीलाई
मेरो खुसी मेरो सुख सबै सबै तिमीलाई
यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमीलाई माया
बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा…
श्वर सम्राट नारायण गोपालको जादुमय श्वरको यो लोकप्रिय रोमान्टिक गीतले मेरो मनलाई भेलाईन्टाइन डे तर्फ डोर्‍यायो। एकछिन झोक्रिएँ र सम्झिएँ ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात फ्रेबुअरी १४ तारिखलाई।
संसारका प्रेमी–प्रेमिका, प्रेम गर्ने र प्रेम गर्न चाहनेका लागि एउटा विशेष उत्सवको दिन हो आज। आफूले माया गरेको, मनपराएको वा चाहेको मान्छेलाई आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्ने दिन हो। अर्थात प्रणय दिवस।
प्रेम आफैँमा एउटा रङ्गीन अनुभूति हो। कसैसँग प्रेमको कल्पना गर्दा मात्र पनि शरीरमा अर्कै तरङ्ग सञ्चार हुन्छ। त्यसमाथि युवा मन, प्रणय चिन्तनले तरङ्गीत बनाउने नै भयो। प्रणय दिवसले प्रत्येक वर्ष संसारका हरेक युवा युवतीको मनमा यस्तै तरङ्ग सृजना गर्छ। मनमा उत्पन्न भएको तरङ्गलाई आफ्नो मनले खाएकोलाई अभिव्यक्त गर्ने दिन नै हो प्रणय दिवस अर्थात भ्यालेटाइन डे! यो दिनले धेरै मनबीचको पर्खाल भत्काउँछ। सीमारेखाहरू मेटाउँछ र दुई मुटुलाई एक गराउँछ। सुन्दर नयाँ संसारको सपना देखाउँछ।
१४ फेब्रुअरीको दिनले दैनिक जिन्दगीमा कसैलाई तनाब त कसैलाई थप उत्साह सृजना गर्नसक्छ। किनकि, त्यस दिन परिवार, साथीभाई, आफन्त, प्रेमी/प्रेमिकाका साथ भ्यालेन्टाइन डे कसरी मनाउने भन्ने कुराले सताउन सक्छ। आउनुस्, यस दिवसलाई तनावमुक्त पारौं यी टिप्सहरु जम्मा पारेर।
भ्यालेन्टाइन डे मा के गर्ने?
आफ्नो मायालाई उत्साहका साथ प्रकट गर्नुहोस्। भ्यालेन्टाइन डे एउटा विषेश दिन हो जुन दिन आफ्नो प्रेमलाई उत्साहका साथ प्रकट गरिन्छ। प्रेमी प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमको सफलतामा खुशी प्रकट गर्दै भविस्यमा अझै गाढा माया बसोस् भनी कामना गर्ने पनि यही भ्यालेन्टाइन डे हो।
त्यस्तै मायाको गोरेटोमा हिँड्दा ती विशेष दिनहरू, क्षणहरू तथा घटनाहरू जसले हसायो, सायद रुवाएको पनि हुनसक्छ, ती प्रत्येक हाँसो र रूवाईहरू जसले आफ्नो मायाको डोरीलाई कस्न प्रोत्साहन गर्‍यो, त्यसलाई सम्झने दिन पनि भ्यालेन्टाइन डे नै हो।
यस दिन पुराना फोटोहरू हेर्ने, ईमेल, टेक्सहरू पढ्ने र विगतलाई सम्झना गर्दै आपसमा कुरा गर्नाले यस दिनमा विशेष मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नो प्रेमी प्रेमिकाबीच मात्र नभएर माया प्रेम गर्ने सबै आफन्तजनका बिच यसरी नै स्मरण गरी तथा ब्यक्त गरी भ्यालेन्टाइन डे मनाउन सकिन्छ।
अब कुरा पैसामा आयो। भ्यालेन्टाइन डेको आगमन सँगै बजेटको कमीले तनाब हुनसक्छ। यसका लागि उपाय छ। भ्यालेन्टाइन डे घर बाहिर होटल, पार्क, रेस्टुरेन्ट आदिमै मनाउनुपर्छ भन्ने छैन। यस दिन धुमधामले खर्च गरे मात्र प्रेममा सफल भइने पनि होईन। यसका लागि आफ्नै घरमा रमाइलोका साथ मनाउन सकिन्छ।
आफ्नो मेहनत, जाँगर र भावनालाई तपाईको प्रेमी प्रेमिका वा साथी भाइले प्रसंशा गर्ने छन् जब तपाईँ आफ्नै हातले पकाएको खाना सर्भ गर्नुहुन्छ। यसै अवसरमा सक्नुहुन्छ भने आफ्नो साथीको लागि केहि विषेश कविता लेख्नुहोस्। गीत गाउन सक्नुहुन्छ भने रोमान्टिक गीत गाएर सुनाउनुस्, वा उनले मन पराउने कुनै गीत संगीत गाएर हेर्नुहोस्। त्यस्तै सिनेमा हेर्ने भ्याईएन भने आफ्नो साथीले मन पराउने सिनेमा हेर्ने योजना बनाउनुहोस्।
घरैमा गरिने यस्ता साना साना कार्यक्रमले तपाईँको भेलाईन्टाइन डेले विशेष र अविश्मरणीय दिन बनाउनेछ। यसबाट घर परिवार्, साथी भाइ सबै प्रशन्न हुनेछन् भने अर्कोतर्फ मितब्ययी हुने बानीको विकास हुनेछ।
एक आपसमा पुरा दिन बिताउनुस्
एक आपसमा समय बिताउने जस्तो रोमान्टिक र भावनात्मक अन्य कुराले हुँदैन। आपसमा समय बिताउनुको मतलब रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खाने वा केही घन्टा मात्र समय बिताउने भन्ने होइन। कार्यालयको काममा वा ब्यापारिक काममा प्रायः सबै ब्यस्त हुन्छन्।
अलिक अगाडिदेखि नै पुरा समय बिताउन त्यो दिनका लागि बिदाको निवेदन दिएर ढुक्क हुनुपर्छ। यसबाट तपाईँलाई आफ्नो साथी भाई, प्रेमी प्रेमिकासँग समय बिताउन पूर्ण दिन समय हुनेछ। त्यस एक दिनका लागि विषेश दिनका रुपमा लिदै कार्यालय, ब्यापार आदिलाई विर्सदै विषेश दिन बनाउन प्रयत्न गर्नुहोस्।
एक आपसमा अंकमाल गरेर, रमाईलो कुरा गरेर, आफ्नो भावी कार्यक्रम र उद्धेश्यका बारेमा कुरा गरेर समयको सदुपयोग गर्नुहोस्। यदी तपाईँ कुनै कारणवस उपस्थित हुन सक्नुहुन्न भने फोन गरेर, ईमेल गरेर वा टेक्स गरेर तथा उपहार पठाएर यस दिनलाई विषेश दिन बनाउनुहोस्।
साथीसँग अनावश्यक अपेक्षा नगर्ने
भ्यालेन्टाइन डे का दिन प्राय सबैले आफ्नो मिल्ने साथीसँग रमाईलो गर्ने भन्ने अपेक्षा राखेका हुन्छन्, तर आफ्नो यस अपेक्षालाई एउटा सीमा भित्र राख्नुपर्छ। साथीको पारिवारिक अवस्थाका बारेमा जानकार हुनु त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
भ्यालेन्टाइन डे का दिन प्रायः जोडी बाधिएर घुम्न जाने, मिठो मिठो खाने पिउने, मनोरन्जन गर्ने गर्छन्। यसै प्रसङ्मा यो पनि सम्भव छ कि आफ्नो महिला साथीका श्रीमानले भ्यालेन्टाइन डे का दिन आफ्नो पत्नीलाई घुम्न जाने योजना बनाएको हुनसक्छ। त्यस्तै, पुरूष साथीको प्रेमिकाले भ्यालेन्टाईन डे मनाउन आफ्नो प्रेमीका साथ कुनै रेस्टुरेन्टमा जाने योजना बनाएको पो छ कि!
यस अवस्थामा साथीको अपेक्षा राख्नु गलत हुनेछ। त्यसैले, आफ्नो नजिकको नाता वा सम्बन्ध हुँदा हुँदै साथीसँग भ्यालेन्टाइन डे मनाउन कसैको पनि प्राथमिकता भित्र पर्दैन। अत: जुन साथीहरुले आफूसँग भ्यालेन्टाइन डे मनाउँछन् त्यसैमा आफू खुसी हुनुपर्छ र साथीले दर्साएको माया र सद्भावको प्रसंशा गर्नुपर्छ।
अरूको नक्कल नगर्ने
भ्यालेन्टाइन डेमा रातो गुलाफ को फूल र चकलेट नै उपहार दिनुपर्छ भन्ने एउटा ट्रेन्ड नै चलेको छ। तर, यो सही होइन। किनकि यो त लहर र लहडले सबैले गर्दै आएका हुन्। त्यस्तै, तपाईँका अन्य साथी भाईको देखासिखीमा उनीहरूले जस्तै गरी मनाउनुपर्छ भन्ने छैन।
यदी तपाईँ केही नयाँ पन देखाउन चाहानुहुन्छ वा विषेश गर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो साथीलाई कुनै नौलो सोच बनाउनुस् जसबाट तपाईँको साथीले हर्षका आँशु पोख्न सकुन्।
भ्यालेन्टाईन डे जती नजिक आउछ त्यती नै यस दिनको प्रचार प्रसार ब्यापक हुँदै जान्छ। गुलाबी र रातो मुटुको आकार (लभ) का सामाग्रीहरु, चकलेट, रातो गुलाफको फूललगायत टिभी, पत्रपत्रिका र सामाजिक सन्जाल जताततै देख्न पाईन्छ।
भ्यालेन्टाइन डेलाई प्रेमी प्रेमीकाले मात्र मनाउने हो भन्ने बुझाई गलत हो। यदि तपाईसँग प्रेमी वा प्रेमीका छैन भने पनि यस दिनलाई मनाउन सक्नुहुन्छ। यो भेलाईइन्टाइन डे महंगो दिवस भयो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने यस दिनलाई अरूले झै तडक भडकका साथ मनाउनुपर्छ भन्ने छैन।
आफ्ना साथीभाई, परिवारसँग बसेर समय बिताउने, अतितका कुरा गर्ने, भविश्यको योजनाका कुरा गर्ने आदि जस्ता रचनात्मक सोच विचारमा समय बिताउन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई यस दिन भ्याई नभ्याई छ, फुर्सत पाउन सक्नु भएन भने पनि केहि फरक पर्दैन, वर्षको पुरा ३६५ दिन नै तपाईँलाई प्राप्त छ। आफूलाई जुन दिन अनुकुल मिल्छ त्यही दिन साथीभाई, आफन्त वा प्रेमी प्रेमीका बिच माया साटासाट गर्न सक्नुहुन्छ।
अब प्रसंग भ्यालेन्टाइन् विक वा प्रणय सप्ताहको
१४ फेब्रुअरीका लागि धेरै मान्छेहरू विशेष गरी युवा युवतीहरू प्रतिक्षारत भएको पाईन्छ। वर्ष दिनको सवैभन्दा रोमान्टिक दिनका रूपमा मानिने ‘भ्यालेन्टाइन डे‘ का लागि मान्छेहरू मायाँ र प्रेम बाँड्न आतुर हुन्छन् र आ–आफ्नै तरिकाले तयारीमा लागेको पाईन्छ। आफ्नो दक्ष्य अनुशार फूल, कार्ड, चकलेट, उपहार,किनमेल धेरै कुराको व्यवस्थापनमा मान्छेहरू व्यस्त भएको देखिन्छ।
मान्छेहरू पुरा साता नै ‘भ्यालेन्टाइन विक‘ का रूपमा सेलिव्रेट गर्छन्। फेब्रुअरी ७ देखि १४ सम्म प्रत्येक दिन कुनै न कुनै रूपमा मनाउँछन्। फेब्रुअरी ७ मा गुलाफ दिन (रोज डे), ८ मा प्रस्ताव दिन (प्रपोज़ डे), ९ मा चकलेट दिन, १० मा टेडी डे, ११ मा वाचा दिन ( प्रमिस डे), १२ मा अंकमाल दिन (हग हे), १३ मा चुम्बन दिन (किस डे) र फेब्रुअरी १४ मुख्य दिन जसलाई धेरै युवा युवतीहरू प्रतिक्षारत छन्। यस दिनलाई प्रेम/प्रणय दिन (भ्यालेन्टाइन डे) भनेर चिनिन्छ।